Tababare Caanka ka ah Soomaaliya oo Maanta ku geeriyooday Muqdisho. – Puntland Voice
May 29, 2010 2:45 pm Views: 54
Alle ha u naxariistee waxaa Maanta Magaalada Muqdisho ku geeriyooday Maxamd Xuseen Shiiqaalow oo ahaa Ciyaaryahan hore caan ugu ahaa dhanka Kubada cagta Soomaaliya, xiliyadaan danbana ahaa Tababare can ah.
Marxuum Shiiqaalow waxaa uu Maanta ku geeriyooday Degmada Xamar weyene ee Muqdisho xili uu u sii socday degmada kale ee Waaberi kadib markii uu wadnaha istaagay.
Alle ha u naxariistee waxaa lagu wadaa in isla maarna lagu aaso Ciyaaryahankani hore waxaana uu xiliyaaan danbe tababare u ahaa Kooxda Heerka koowaad ee Dekadaha oo ka dhisan Magaalada Muqdisho.
Ciyaaryahan Shiiqalow waxaa aad loogu xasuustaa intii uu ciyaaraha ku dhex jiray waqtigii hore laadadka ama shuudadka dheedheer,waxaanalagu naaneysi jirey xiligii bari samaadkioi Shiiqaalow iyo Shabaqa.
Haddii aan wax yar taariikhdiisa dib u raacno Alle ha naxariistee Ciyaar yahan Shiiqaalow waxaa uu ku dhashay Degmada Shibis sanadkii 1955-tii, waxaana uu ciyaaraha ka bilaabay gudaha Xaafadaha degmada Shibis kadibna waxaa qaadatay kooxda Minishiibiyo oo in badan uu u soo ciyaray .
Intii uu ciyaaraha ku dhex jiray waxaa uu ku soo caanbaxay kooxda Minishiibiyo oo mudo uu u soo ciyaarayay ka hor intii aan bur bur ku imaan Dowladii Milatariga ee Maxamed Siyaad.